मधेशी जनताले हामीसँग पनि प्रश्न गर्न थालेको छ (अन्तरवार्ता) | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » मधेशी जनताले हामीसँग पनि प्रश्न गर्न थालेको छ (अन्तरवार्ता)
मधेशी जनताले हामीसँग पनि प्रश्न गर्न थालेको छ (अन्तरवार्ता)
अध्यक्षमण्डलका संयोजक एवं सांसद, राजपा नेपाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । त्यो सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सहभागी भएको छ भने राजपा नेपालले बाहिरबाट समर्थन दिएको छ । सरकारलाई समर्थन दिएपनि सविधान संशोधन लगायतका मागहरु पुरा भएको छैन । राजपा र फोरमले त्यसका लागि संघर्षलाई कायम राखेको छ । तर सरकारले कुनै सुनुवाई गरेको छैन । सरकारलाई समर्थन दिएपनि किन सुनुवाई गरेको छैन, अब यसको विकल्प के हुन्छ लगायतका विषयमा सहारा टाइम्सका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक एवं सांसद महेन्द्रराय यादवसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश
सरकार गठन भएको एक वर्ष हुन लागेको छ, त्यसलाई तपाईले कसरी मूल्यांकन गर्नुृहुन्छ ?
–सरकार गठन भएको एक वर्ष भएपनि त्यो अवधिमा मूल्यांकन गर्ने खालको कुनै काम गरेको छैन । कुनै काम गरे पो मूल्यांकन गर्ने हो । कुनै काम नै भएको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । सो दलमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका छन् । उनीहरुले काम भन्दा बढ्ता हल्ला गरेका छन्, जनतालाई सपना देखाइरहेका छन् तर कामको नाम एउटा सिन्को पनि भाँचेको छैन । नत्र यो एक वर्षमा मैले यो एउटा काम गरेको छु भनेर देखायोस् त । तीन तहको चुनाव भएर यो सरकार गठन भएको हो । चुनाव पनि यो सरकारले गराएको थिएन । यद्यपी तीनटै तहमा नेकपाकै बहुमत छ तर कही काम भएको छैन । वर्तमान सरकारप्रति स्थानीय तह, प्रदेश पनि असन्तुष्ट देखिन्छ । उनीहरुले पनि गुनासो गरिरहेको सुनिन्छ र देखिन्छ भने यो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने तपाई नै भन्नुस् ।
तपाई संयोजक रहेको दलले पनि समर्थन गरेको यो सरकार हो, यदि सय मार्कसमा यो सरकारलाई मार्किङ् गर्नु पर्यो भने तपाईले कति मार्कस दिनुहुन्छ ?
–हामीले यो सरकारलाई काम गर्नका लागि समर्थन दिएका हौं । दुई तिहाईका अभाव नहोस्, बलियो शक्तिशाली सरकार होस् । सविधान संशोधन गर्नलाई कुनै समस्या नहोस् भनेर हामीले समर्थन दिएका हौं । सरकारमा बसेर ख्याल ठट्टा गर्न वा मौजमस्ती गर्नका लागि समर्थन दिएका होइनौं । सविधान संशोधन गर्न तयार भएपछि हामी मात्र किन बाहिर बस्ने भनेर समर्थन दिएका हौं । यदि हामी समर्थन नगरेर बाहिर बसेको भए नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्न सक्नुहुन्थ्यो कि जसका लागि हामी सविधान संशोधन गर्न तयार भएका छौं उनीहरुले सरकारलाई समर्थन गरेको छैन सरकार बाहिर बसेका छन् अनि किन संशोधन गरौं ।’ उहाँहरुलाई भन्ने ठाउँ हामीले छाडेका छैनौ । हामीले उदार ह्रदयले समर्थन गर्यौं तर सरकारले हामीलाई धोका दिइरहेको छ । हामीले समर्थन गरेको एक वर्ष विति सकेको छ तर हाम्रो माग एक कदम अगाडि बढेको छैन । हामीले पनि मधेशी जनतासँग केही प्रतिवद्धता गरेर यहाँ आएका हौं, त्यो प्रतिवद्धता पुरा नगरेपछि मधेशी जनताले जिरोमा मूल्यांकन गर्छन् । अर्थात मधेशी जनताले हामीलाई राम्रो मार्कस दिँदैन भने हामी मात्र किन यो केन्द्रीय सरकारलाई मार्कस दिने । मार्कस दिने लायकका कुनै काम नै गरेका छैन ।
काम गरेका छैन भन्नुहुन्छ, तर कैलाली घटनाको मुख्य आरोपी जो थुनामा हुनुहुन्छ उहाँलाई सपथग्रहण गराउने काम सरकारले गरेको छ नि ?
–रेशम चौधरीलाई सपथग्रहण गराउनु सरकारको बाध्यता थियो । जनताले जिताएका व्यक्तिलाई थुनामा राखेको छ । सपथग्रहण गराएको छैन भनि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा बेइज्जति हुन थालेपछि बाध्य भएर सपथ गराएको हो । यदि रेशम चौधरी अपराधी भएको भए त्यहाँका जनताले उहाँलाई मत दिएर कसरी जिताउथ्यो त । टीकपुरमा भएको घटनाका कारण उहाँको घरमा आगजनी भयो । प्रहरीले उहाँलाई खोजीको सूचीमा राख्यो । बाध्य भएर उहाँ भाग्नुभयो । प्रहरीबाट लुक्दै छिप्दै अवस्थामा उहाँले उम्मेदवारी दिनुभयो । र, अत्याधिक मतले उहाँले जित्नुभयो । आन्दोलनको क्रममा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण एउटा घटना हुन पुग्यो । जसमा दुवैतिर क्षति भएको छ । क्षतिपूर्ति दुवै पक्षले पाउनु पर्ने हो । न्याय दुवै पक्षले पाउनु पर्ने हो तर यहाँ एकतर्फि रुमा थारु समुदायलाई देखाइरहेको छ जो न्याय संगत छैन । टिका थारु समुदाय अहिले पनि क्रसित अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । अझै पनि कतिपय युवाहरु घर फर्केका छैनन् । त्यसैले त्यहाँको त्रसित वतावरण हटाउन, युवाहरुलाई घर फर्काउने वतावरण बनाउन पनि हामी सरकारसाग माग गरिरहेका छौं । रेशम चौधरीलाई सपथग्रहण गराएर मात्र हुँदैन, उहाँलाई रिहाय पनि गर्नुपर्छ भनि हामीले माग गरेका छौं तर सरकारले सुनिरहेको छैन ।
सरकारले तपाईहरुको माग पुरा गर्यो भने सफल, तपाईहरुको माग पुरा गरेन भने असफल होइन ?
–हो, मधेश सफल नभएपछि देश सफल हुँदैन । देश सफल हुनका लागि मधेशलाई सफल बनाउनुपर्छ । देशको आधाभन्दा बढी हिस्सा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडिएकाले ओगटेका छन् । त्यसले आफ्नो अधिकार पाउँदैन भने यो देश कसरी सफल हुन्छ । मधेशी, आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो अधिकारका लागि लडाई लडेका हुन् । यत्रो लडाई लड्दा पनि अधिकार नपाएपछि देश सफल हुन सक्दैन । त्यसले सफल हुनका लागि मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायत पिछडिएका समुदायसँग सरकारले गरेका सम्झौताहरु पुरा गर्नुपर्छ । अनि मात्र सरकार सफल भएको मान्छौ नत्र हामीले जिरो नम्बर दिन्छौं ।
एक वर्षमा तपाईहरुको पनि मूल्यांकन हुन्छ नि संसदमा हुनुहुन्छ, सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ यो एक
वर्षमा के के गर्नुभयो मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतका लागि ?
–मैले अघि पनि भनेको थिए कि हामीले मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमसँग विभिन्न प्रतिवद्धता जनाएर यहाँसम्म आइपुगेका हौं । चुनाव लड्दा उहाँहरुको अधिकारका लागि लड्ने र अधिकार सुरक्षित गराउने प्रतिवद्धता जनाएको थिए । र, त्यहाँका जनताले हामीलाई सविधान संशोधन गराउने भनि म्याण्डेट दिएर पठाएका थिए तर एक वर्ष भइसक्यो हामीले गरेका कुनै पनि प्रतिवद्धता पुरा गराउन सकेका छैनौ भनि हाम्रो मूल्यांकन त्यसै अनुसार हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने केन्द्रका लागि हामीले गरेको कुनै प्रतिवद्धता हामीले पुरा गरेका छैनौ । हाम्रो माग पुरा नगरेको भन्दै जसरी हामीले सरकारलाई जिरो मार्कस दिइरहेका छौं त्यसरी नै मधेशी जनताले हामीलाई जिरो मार्कस दिँदै होला र त्यो हामी स्वीकार गर्छौ ।
एक वर्षको अवधिमा तपाईहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ११ पटक भन्दा बढी पटक भेट्नु भएको छ, चारवटा ज्ञापनपत्र नै बुझाउँनु भएको छ, अब पनि कति पटक भेट्नु हुन्छ, कतिवटा ज्ञापनपत्र बुझाउनु हुन्छ ?
–एक समय थियो मधेशी मोर्चाले सरकारसँग ३६ पटक वार्ता गर्यो तर कुनै माग पुरा भएन । र, अहिले पनि हामी जहाँको त्यही छौं । ११ पटक मात्र होइन, त्यो भन्दा पनि बढी भेटेको होला जस्तो लाग्छ यो एकवर्षको अवधिमा । भेट्ने वार्ता गर्ने छलफल गर्ने हाम्रो बाध्यता पनि हो । हामी लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्छौ । वार्ता र छलफलबाट समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छौं । वार्ता गरिएन भने हामीमाथि आरोप लाग्न सक्छ कि वार्ताबाट भाग्यो । वार्तामा नै बस्दैन अनि कसरी समस्या समाधान हुन्छ भनि आरोप लाग्न सक्छ त्यसैले हामी वार्तामा जान्छौं । अर्को कुरा सरकारले पनि समस्या छ भने स्वीकार गरेको छ । सविधानमा त्रुटी छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले नै पटक पटक सार्वजनिक रुपमै सविधान संशोधन हुने कुरा भन्नुभएको छ । हामीसँग वार्ता गर्दा पनि उहाँले निकै सकारात्मक कुरा गर्नुहुन्छ । उहाँले त भोली नै सबै काम सिध्याउ जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ । त्यसैले हामी आशा गरेर बसेका छौं, वार्ताबाट नै समस्या समाधान हुन्छ भनि हामीले विश्वास लिएका बसेका छौं । त्यही भएर हामी पटक पटक सरकारसँग वार्ता गर्न तयार हुन्छौं तर यस्तै अवस्था अब धेरैदिनसम्म रहने छैन । हामीले मधेशी जनतालाई पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । मधेशी जनताले हामीलाई सोध्न थालेको छ कि तपाईहरुले सरकारलाई समर्थन गरेर के गर्नुभयो किन समर्थन गर्नुभयो, हाम्रो माग पुरा नगर्ने भएपछि किन समर्थन गरेर बस्नु भएको छ भनि जस्ता प्रश्न हामीलाई गर्न थालेको छ । तर, हामीलाई थोरै झिनो आशा छ कि सरकारले केही गर्छ कि, माग पुरा गरि दिन्छ कि । तर गर्न सकिरहेको छैन । हामीले छलफल र वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पटक पटक समय माग गरेको छु तर उहाँले समय उपलब्ध गराइ रहनु भएको छैन । अहिलेसम्म हामी धैर्य गरेर बसेका छौं, धैर्यको बाँध फुट्यो भने यसको नतिजा राम्रो हुँदैन । यसबाट हुने क्षति सरकार स्वंय हुनेछ भने कुरा हामीले पटक पटक सरकारलाई भन्दै आएका छौं ।
तपाईको कुरा सुन्दा त मधेशको समस्या कहिल्यै समाधान नहुने देखिएको छ, देश आर्थिक समृद्धिका लागि अगाडि बढी सकेको छ तपाईहरु अझै आन्दोलनकै धम्की दिइरहनु भएको छ । यसरी आन्दोलन भइरह्यो भने मधेशमा कहिले विकास हुँदैन सधै पछाडिको पछाडि नै रहने भयो होइन ?
–हेर्नुस्, राजनीतिक समस्या समाधान नगरिकन देशमा आर्थिक समृद्ध हुनसक्दैन । सरकारले आर्थिक समृद्धिको ठूला ठूला नारा दिन थालेको छ । ठूला ठूला बोर्ड झुण्ड्याउन थालेको छ । कहिले के सम्मेलन, कहिले के उद्घाटन गरिरहेको छ सरकारले । बोर्ड झुण्ड्याएर, नारा लगाएर मात्र देशमा आर्थिक समृद्धि हुँदैन । सबभन्दा पहिले राजनीतिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि झन थप्दै गइरहेको छ । समस्या थप्दै गएपछि पछि सरकारलाई नै घाँरो हुनेछ । त्यसैले मधेश लगायत आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित उत्पीडनमा परेका समुदायको समस्या चाँडो समाधान गर्नुपर्छ हामीले भन्दै आइरहेका छौं । मधेशी जनता पनि समृद्धि चाहन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, रोजगार चाहन्छ तर सरकारले समावेशी ढंगबाट दिन मानेको छैन । त्यसैको लडाई भइरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक समस्या चाँडै समाधान गरेर आर्थिक समृद्धका लागि काम गर्दा राम्रो हुने हामीले सुधाव दिइरहेका छौं ।